China Isilinda esineembovane Ukunikela abavelisi kunye nabathengisi | Xinri
Iibheringi ze-Cylindrical roller ziyafumaneka kuluhlu olubanzi loyilo, uthotho, umahluko kunye nobukhulu. Umahluko ophambili kuyilo linani leeroller roll kunye neeringi zangaphakathi / zangaphandle zeringi kunye noyilo lwekheji kunye nezinto.
Iibheringi zinokuhlangabezana nemiceli mngeni yezicelo ezijamelene nemithwalo enzima yeeradial kunye nesantya esiphezulu. Indawo yokuhlala ye-axial displacement (ngaphandle kweebheringi ezineeflanges kumakhonkco angaphakathi nangaphandle), anikezela ukuqina okuphezulu, ukungqubana okuphantsi kunye nobomi benkonzo ende.
Iibheringi ze-Cylindrical roller nazo ziyafumaneka kuyilo olutywiniweyo okanye olwahluliweyo. Kwiibheringi ezitywiniweyo, izileyi zikhuselekile kwizingcolisi, amanzi nothuli, ngelixa zibonelela ngokugcina izinto zokuthambisa kunye nokungabandakanywa okungcolileyo. Oku kunika ukukhuhlana okuncinci kunye nobomi benkonzo ende. Ukwahlula iibheringi zijolise ikakhulu kumalungiselelo okuphatha ekunzima ukufikelela kuwo, afana ne-crank shafts, apho enza lula ukugcinwa kunye nokufakwa endaweni yawo.
Ulwakhiwo kunye neempawu
Umjikelo wendlela kunye nokuqengqeleka komzimba we-roller cylindrical bearing uneemilo zejiyometri. Emva koyilo oluphuculweyo, amandla okuzala aphezulu. Uyilo lwesakhiwo esitsha sobuso bokugqibela kunye nobuso bokugqibela obunobumbano aluphuculi kuphela amandla okuthwala i-axial, kodwa luphucula imeko yokuthanjiswa kobuso bokugqibela kunye nendawo yokudibana yobuso bokugqibela kunye nobuso bokugqibela, kwaye iphucula ukusebenza kwebhere.
● Ukuqina okuphezulu
● Ukungqubana okuphantsi
● Iakhawuntiukufuduswa kwe-axmodate axial
Ngaphandle kweebheringi ezineefleks kuwo omabini amakhonkco angaphakathi nangaphandle.
● Uyilo lweflange evulekileyo
Kunye noyilo isiphelo mqengqeleki kunye umphezulu entanjeni, ukukhuthaza izinto zokuthambisa umboniso ekhokelela ukukhuhlana asezantsi kunye nomthwalo axial umthwalo ethwele amandla.
Iprofayile ye-logarithmic roller inciphisa uxinzelelo lomda kunxibelelwano lwe-roller / raceway kunye nobuntununtunu bokungalungelelani kunye nokushenxiswa kweshafti.
● Ukuphuculwa kokuthembeka kokusebenza
Umphezulu wokugqiba kumhlaba wonxibelelwano wee roller kunye neewayeways uxhasa ukuyilwa kwefilimu yokuthambisa yehydrodynamic.
● Iyahluka kwaye iyatshintshana
Izinto zokwahlulahlula iibheringi ze-XRL ze-cylindrical roller ziyatshintshana. Oku kuququzelela ukunyuka kunye nokuhla, kunye nokuhlolwa kokugcinwa.
Isetyenziswa ngokubanzi kwiimotor ezinkulu neziphakathi, iinqwelomoya, izixhobo zoomatshini, izixhobo zomlilo zangaphakathi, iijenereyitha, oomatshini bokwenza igesi, iibhokisi zegiya, amatye okusila, izikrini ezirhabaxa, nokuphakamisa nokuhambisa oomatshini.
Egqithileyo Inaliti roller iibheringi
Okulandelayo: Iibheringi roller ukulenza
zonke iibheringi roller ezijikelezayo
enkulu cylindrical mqengqeleki ukuzala
cylindrical mqengqeleki ukuzala
cylindrical mqengqeleki isicelo ethwele
I-nnf nup nupk i-cylindrical roller ethwele